I-European Union Steel: Kulindeleke ukuba imveliso yeshishini lokusetyenziswa kwesinyithi ye-EU izokwehla nge-12.8% ngonyaka-ngonyaka ngo-2020
Ixesha Post: 08-25-2020
I-European Iron and Steel Union (i-Eurofer, ebizwa ngokuba yi-European Iron and Steel Union) nge-5 ka-Agasti ikhuphe uqikelelo lwentengiso lokuba ukuphuma kwawo onke amashishini atya intsimbi kwi-EU kuya kwehla nge-12.8% ngonyaka-kwi-2020 kwaye inyuke nge-8.9% ngo-2021. Nangona kunjalo, i-European Steel Federation ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukungeniswa kwentsimbi eVietnam kwehle nge-5.4% kwisiqingatha sokuqala sonyaka
Ixesha Post: 07-16-2020
Kwiinyanga ezintandathu zokuqala zalo nyaka, iVietnam yathumela ngaphandle iitoni ezizizigidi ezi-6.8 zeemveliso zentsimbi, kunye nexabiso lokungenisa elizweni elingaphezulu kwe-4 yezigidigidi zeedola zaseMelika, eyayikukuhla kwe-5.4% kunye ne-16.3% xa kuthelekiswa nexesha elifanayo lokugqibela. unyaka. Ngokwe-Vietnam Iron and Steel Associati ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukuphuculwa kobuchwephesha bokuchasana nokubuyela umva kwetafile yokupholisa umoya opholileyo ukunyusa isivuno sensimbi evelayo
Ixesha Post: 07-14-2020
Ngalo lonke eli xesha, i-Xinxing Steel ifakela ukubaluleka okukhulu kumgangatho wentsimbi kwaye ujonga umgangatho njengeyona nto iphambili kuqala. Apha, xa isantya esiphezulu somoya opholileyo kwitafile yesebe eliqengqelekayo leXinxing Iron kunye neZityalo zensimbi eXinjiang isebenza, ukuba inkqubo elandelayo ihlangana ne-emergenc ...Funda ngokugqithisileyo »
Iziphumo zobushushu bokucima kulwakhiwo oluncinci kunye neepropathi zentsimbi yenqanaba lesibini
Ixesha Post: 07-03-2020
Njengegazi lemizi-mveliso, ioyile ithatha indawo ebalulekileyo kwisicwangciso samandla. Isitshixo sokwandisa imveliso yeoyile kwilizwe lam kukuphucula itekhnoloji yokomba ioyile. Itekhnoloji eyandisiweyo yetyhubhu kubalulekile kubunjineli obutsha beoyile kunye negesi itekhnoloji entsha evelisiweyo kwaye yaphuhliswa ...Funda ngokugqithisileyo »
I-European Union iqhuba uphando ngokuchasene nokulahla inkunkuma yaseTurkey, engekho-alloy okanye enye ingxubevange eshushu-esongwe iimveliso zentsimbi ethe tyaba
Ixesha Post: 06-11-2020
Ngomhla we-14 kuMeyi 2020, iKhomishini yaseYurophu yakhupha isaziso esichaza ukuba i-Eurofer, egameni labavelisi beemveliso zentsimbi ezishushu ezishushu, i-non-alloy okanye ezinye i-alloys, zibalwe ngaphezulu kwe-25% yemveliso iyonke kwi-EU, ecetywayo nge-Matshi 31, 2020 yeYurophu ...Funda ngokugqithisileyo »
Inguqulelo kwiShishini le-Iron kunye ne-Iron "Yiya kwiNkcubeko kwaye ufumane uMgangatho"
Phantsi koxinzelelo olwehlayo kuqoqosho lwesizwe, inguqu kunye nokuphuculwa kweshishini lesinyithi ayisiyomfuno yophuhliso lweshishini ngokwalo, kodwa ikwanesidingo sokusombulula ubuninzi bemveliso yentsimbi kunye nokususa iimveliso kunye neenkqubo ezingasemva. Njengomntu ophambili ...Funda ngokugqithisileyo »
Iqela leBaosteel's lama-60 leminyaka yokuveliswa kwentsimbi liqokelele iitoni ezizizigidi ezingama-240 zentsimbi
Intatheli yafunda kwiQela leBaosteel nge-2 kaJuni ukuba ukusukela oko i-Baosteel Group's No. 1 evulekileyo yentsimbi yacofwa ngo-1960, iBaosteel Group yavelisa i-240 yezigidi zeetoni zentsimbi kwiminyaka engama-60. Imveliso yensimbi yeBaosteel Group igqithile kumanqanaba amathathu eziko lokufa ...Funda ngokugqithisileyo »
I-China yeBaosteel yehlisa amaxabiso e-Apr
Ixesha Post: 04-16-2020
Ngokwengxelo evela e-Baosteel yase China, enye yeengxilimbela eziphambili zentsimbi emhlabeni, u-Baosteel uthathe isigqibo sokunciphisa amaxabiso asekhaya ngo-Epreli. Ngaphambi koko, imarike yayiqinisekile ngamaxabiso amatsha ka-Epreli nguBaosteel, ikakhulu ngenxa yokuba kukho imigaqo-nkqubo emininzi evuselelweyo ...Funda ngokugqithisileyo »
Ixabiso le-nickel ye-LME likhula nge-700 / iitoni nge-13 ka-Mar 13
Ngokweendaba zentengiso, amaxabiso e-nickel kwiLondon Metal Exchange (LME) nge-13 ka-Matshi, ayenyuke nge-US $ 700 / ngetoni, amisa imeko eyehlayo. Ukuchaphazeleka kukukhathazeka kwehlabathi kwindyikityha ye-COVID-19, ixabiso le-nickel kwiveki ephelileyo laboniswa ngokungathandabuzekiyo, lade laphuka laya ezantsi kwe-US $ ...Funda ngokugqithisileyo »